Zvakakosha Webhu Dhizaini Matekiniki Ekubatanidza pane yako Mutemo Firm Webhusaiti | Martech Zone
Pamusika wanhasi zviri pamutemo uri kuramba uchikwikwidza. Nekuda kweizvozvo, izvi zvinoisa kumanikidza kwakawanda kune magweta mazhinji uye mafemu emutemo kuti vabude pane mamwe makwikwi.
Zvakaoma kuomera a hunyanzvi huvepo online. Kana yako saiti isiri kumanikidza zvakakwana, vatengi vanoenderera kune vako vanokwikwidza.
Ndokusaka, yako brand (uye inosanganisira webhusaiti yako) inofanirwa kukanganisa bhizinesi rako, ikubatsire iwe kuwana vatsva vatengi, uye kuwedzera mari yako.
Mune ino posvo, isu tinokufamba iwe neakakosha webhu dhizaini matekitori iwe aunogona kuisa pane yako yemutemo femu saiti:
Ronga Kutanga Pamberi Chero Chinhu Chero
Yako webhusaiti inomiririra yako firm firm, maitiro ako - mhando yako.Vashandisi vewebhu pavanoshanyira yako saiti kekutanga, ivo vanotova neyekutanga ficha yakaumbwa.
Saka, kana iwe uri kushandisa isiriyo template uye yako saiti inotaridzika yakafanana nemazana emamwe mafemu pa internet, saka iwe unozotadza kuita yakasarudzika ficha nevateereri vako.
Nei mutengi angakurangarira iwe kana yako saiti inotaridzika chaizvo senge mamwe mafemu avakaona?
Saka, ronga zvinoenderana. Heano mashoma matipi.
Zvishoma zvakawanda. Usazadze webhusaiti yako nezvinyorwa nemifananidzo. Pane kudaro, tarisa pazvinhu zvinoita kuti zvemukati zviverengeke uye zvinomanikidza.
Vashanyi vanogona kuedza kuwana pane akasiyana nhare mbozha. Saka, dzivisa kuwedzera akaomarara maficha pane ako saiti mapeji senge flash animations. Zvakare, usagadzira mapeji ako nenzira inokodzera chete saizi hombe dzescreen.
Ive neshuwa kuti iwe une hunyanzvi logo dhizaini. Ita shuwa kuti yakasarudzika; kana zvisina kudaro, urikugadzira yakasarudzika pfungwa. Kunze kweizvozvo, iwe unogona zvakare kuisa pachena iwe kune yakanyanya yepamutemo njodzi.
Mhanya bvunzo. Ratidza kuti ndezvipi zvemukati, mavara, uye mabhatani anokuwanisa iwe zvakanyanya kudzvanya.
Nyengetedza vashandisi vako kuti vatore matanho. Funga nezve chiito chaunoda kuti vashandisi vako vaite vachishandisa akakurumbira kudana-kune-chiito.
Tarisa pane Zvemukati Zvako
Kana iwe usati uchiziva nezvazvo, tsvaga injini indekisi saiti zvichibva pane zvinongedzo uye zvemukati zvemhando. Nekudaro, iyo yakawanda yemukati yaunoburitsa, inowedzera kukwezva ichave iri yekutsvaga injini.
Ita shuwa kuti iwe unogara uchitsikisa kutsva, kumanikidza, uye zvemhando yepamusoro zvemukati. Mikana ndeyekuti, kuve nehurombo zvemukati kunokonzeresa kuti mushanyi wesaiti asiye yako saiti.
Zvakare, usatarisira pasi yekugadzira misoro ine simba. Ivo vanogona kuita mutsauko pakati pewebhu mushanyi achiverenga zvese zvemukati zvemukati kana kusiya yako saiti.
Funga Nezve Kufamba Kwako
Iwe unofanirwa kushandira kune nyore nyore kufamba webhusaiti. Ita shuwa kuti iri futi inoteerera kune ese marudzi emidziyo - kubva kune mafoni, mahwendefa, makomputa edesktop, nezvimwe.
Hezvino zvimwe zvinhu zvekufunga kuona kuti iwe unovaka saiti iri nyore kushandisa:
Chengetedza iyo yekutanga yekufambisa isina mahwanda asina basa.
Ona kuti izvo zvemukati zviri nyore kuverenga.
Deredza zvimwe zvinokanganisa senge popups, mifananidzo, otomatiki mitambo yevhidhiyo nezvimwe zvemultimedia, nezvimwe.
Kana iwe ukavaka saiti inoshungurudza uye yakaoma kushandisa, unenge uri kudzinga vanotarisira vatengi. Kuti uve nechokwadi chekuti izvi hazviitike kwauri, tarisa saiti iri nyore kuongorora.
Gara Uchishandisa Zvakakodzera Mifananidzo
Paunenge uchiwedzera mifananidzo mune yako saiti, kusarudza stock Photography ingaite senge iri nyore kuita. Asi ine zvayakaipira, zvakare. Mikana ndeyekuti, aya akatoshandiswa nemazana (kana asiri zviuru) emamwe mafemu emutemo.
Kana iwe uchida kumira kunze kwemamwe mapakeji, iwe unofanirwa kushandisa yakakwira-resolution mifananidzo iyo iri yemunhu kune yako brand.
Saka, wadii kuratidza mahofisi ako nechikwata chako mumifananidzo iyi? Iyo inofanidza chiratidzo chako, futi.
Semuenzaniso, iwe unogona kuratidza mifananidzo yemagweta ako kana yako hofisi yekutandarira. Kuita kudaro kunogadzira inodziya, inotaridzika kutarisa pane yako saiti.
Sanganisa Kuteedzera Kwevatengi
Maererano ne Amazelaw - Vamwe vanhu vanowanzo tarisa mafemu emutemo zvichienderana nezano uye zvipupuriro zvevamwe vatengi. Uchapupu ndiyo nzira ine simba kwazvo yezvinyorwa zvekushambadzira. Saka usatya kutya kuishandisa iwe mukana wako.
Iwe unogona kuisa zvipupuriro pane rako reji peji kana kugadzira peji rakasiyana pane yako webhusaiti. Uyezve, iwe unogona zvakare kuisa izvi pane ako magweta profiles.
Iva Newebsite yakagadzirirwa SEO
Saiti yako inoda kugadzirisirwa injini dzekutsvaga kuitira kuti uve unowana mabhenefiti e organic traffic.
Hezvino zvinhu zvishoma zvekuchengeta mupfungwa kana zvasvika kune SEO:
Dzivisa kiyi yekuisa zvinhu sezvo izvi zvinogona kutungamira kune yekutsvaga injini seGoogle kuranga saiti yako.
Shandisa alt zvinyorwa uye mazita akakodzera emifananidzo nekuti inobatsira mainjini ekutsvaga kuti anzwisise zvirimo mukati. Uyezve, shandisa fomati yakakodzera yemagwaro ako futi.
Panzvimbo pekushandisa "tinya pano" kana "tinya apa" kune ako maratidziro, shandisa zvirevo zverondedzero, sezvo ichiita kuti vaverengi vanzwisise kuti yako link ndeyei. Izvo zvakare zvinobatsira kutsvaga injini kuziva kana iwe uri kubatanidza kune akakodzera masosi kana kwete.
Zvakanaka, saka pane iwe unayo! Ndinovimba, aya matipi anozoisa iwe munzira kwayo mukugadzira inoitisa uye yakasarudzika yemutemo webhusaiti webhusaiti iyo inozo shandura vashanyi vako vewebhu kuva vatengi venguva refu.
Tags: mutemo wakasimbalaw firm mawebhusaitimagweta mawebhusaitinhare inopinduraseoweb Design